बजेट सत्रमा एसकेएमले जनतालाई दिएका वचन पारित गर्नुपर्छः एसडीएफ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारबजेट सत्रमा एसकेएमले जनतालाई दिएका वचन पारित गर्नुपर्छः एसडीएफ
March 21, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
बजेट सत्रमा एसकेएमले जनतालाई दिएका वचन पारित गर्नुपर्छ। सिक्किमेली जनता एसकेएम पार्टीको वचनको आधारमा 30,000 जनाले नोकरी पाउने, नोकरी नपाउने 10000 रुपियाँ मासिक भत्ता पाउने, एक परिवार एक नोकरी स्थाही हुने, कृषि तथा बेरोजगार ऋण माफ हुने, एडहक शिक्षक स्थायी हुने, अदुवाको दाम 5000 रुपियाँ र अलैंचीको दाम 50,000 रुपियाँ हुने प्रतिक्षामा छन्। यो सबै आगामी बजेट सत्रमा पारित गरेर एसकेएमले जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्नुपर्छ।
गान्तोक, 21 मार्चः आगामी 23 मार्चदेखि हुने एसकेएम सरकारको बजेट सत्रमा मिडियामाथि रोक लगाइएको विषयलाई एसडीएफ सरकारले तिब्र आलोचना गरेको छ। शनिवार एसडीएफ पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफ प्रवक्ता जेबी दर्नालले बजेट सत्रमा मिडियामाथि रोक लगाएको विषयको आलोचना गर्दै यो एउटा तानाशाही कार्य हो भने। उनले भने, सिक्किममा अहिले कहीँ कतै कहीपनि ठिक छैन्। सरकार विपक्षसित डराएको छ। उनीहरूले गरेको गल्ती र अन्तरद्वन्दको विधानसभामा पोल खोलिन्छ भन्ने डरले एसकेएम सरकारले बजेट सत्रमा मिडियाको प्रवेसमा रोक लगाएको हो। उनले अघि भने, महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई बहाना बनाएर एसकेएम सरकारले यो भाइरसलाई पनि राजनीतिकरण गराएको छ। सरकार यदी भाइरससिच नै चिन्तित छ भने फार्मास्युटिकल कम्पनीमा काम गर्ने हजारौं गरीब कर्मचारीहरूको पक्षमा किन निर्णय लिदैन? कम्पनीमा हजारौं कर्मचारी भेला भएर काम गरिरहेका छन् त उनीहरूलाई भाइरस लाग्दैन? कोरोना त केवल बहाना मात्र हो भन्दै दर्नालले एसकेएम सरकार तानाशाही तथा कम्जोड़ सरकार रहेको आरोप लगाए।
उनले बजेट सत्र हुन अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनको अवसरमा एसकेएम सरकारलाई चुनाउ अघि जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पनि बजेट पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, बजेट सत्रमा एसकेएमले जनतालाई दिएका वचन पारित गर्नुपर्छ। सिक्किमेली जनता एसकेएम पार्टीको वचनको आधारमा 30,000 जनाले नोकरी पाउने, नोकरी नपाउने 10000 रुपियाँ मासिक भत्ता पाउने, एक परिवार एक नोकरी स्थाही हुने, कृषि तथा बेरोजगार ऋण माफ हुने, एडहक शिक्षक स्थायी हुने, अदुवाको दाम 5000 रुपियाँ र अलैंचीको दाम 50,000 रुपियाँ हुने प्रतिक्षामा छन्। यो सबै आगामी बजेट सत्रमा पारित गरेर एसकेएमले जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ पार्टीका अर्का प्रवक्ता एमके सुब्बाले एसकेएम सरकारको कार्यकालको तिखो आलोचना गरे। उनले एसकेएम सरकार सबै वचन र मुद्दामा फेल भएको आरोप लगाए। उनले पार्टीले जनतालाई चुनाउ अघि दिएका वचनहरूको उठान गर्दै त्यो केही पनि पुरा नभएको बताए। उनले भने, स्थानीय सुरक्षाको मुद्दामा एसकेएम सरकार पूर्ण रूपमा फेल भएको छ। 1969 अघि नोकरी गर्नेहरूका परिवारलाई सीओआई दिने सम्बन्धित मुद्दामा एसकेएम सराकारले उच्च न्यायालयमा आफ्नो पक्ष नराखेर वाकओभर दियो, कोर्टलाई कम्भिन्स गराउन नै सकेन। सीएए सम्बन्धमा गृह मन्त्रीले राखेको बैठकमा सिक्किम सरकार सहभागी नै भएन। सिक्किममा सीएए लागू नगर्ने सम्बन्धमा राज्यले विधानसभामा कानून पारित गर्नुपर्ने थियो, त्यो विषयमा पहल नै भएन। अहिले सिकत्किममा सीएए, एनआरसी, एनपीआर सबै लागू भएको छ तर सरकारले भने लागू भएको छैन् भन्दै जनतालाई ढाँट्ने मात्र काम गर्दैछ। सीएए सिक्किममा लागू हुनुमा राज्य सरकार दोषि छ भन्दै उनले सिक्किमका एसकेएम सरकारको कार्यकालमा मानिसहरूको ज्यान पनि अश्तित्व पनि खतरामा रहेको आरोप लगाए। प्रवक्ता सुब्बाले सिक्किम सम्बन्धित सबै मुद्दामा सरकारले आगामी बजेट सत्रमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे।
अर्कोतर्फ सिक्किमका स्वास्थ्य मन्त्री डा. एमके शर्मामाथि हमला भएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि भएको हमला सिक्किमे जनतामाथि भएको हमला हो भने। उनले अघि भने, सिक्किममा एउटा मन्त्रीमाथि दिउसै प्राणघातक हमला हुन्छ भने जनताको के होला? मन्त्रीमाथी भएको हमलाको हामी घोर विरोध गर्दछौं। यो विषयमा सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। पुलिस प्रशासनले जवाफ दिनुपर्छ।